Jaamacadda Carabta oo danjire cusub usoo magacaawday dalka Soomaaliya (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Jaamacadda Carabta oo danjire cusub usoo magacaawday dalka Soomaaliya (SAWIRO)
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya C/qaadir Axmed Kheyre Cabdi ayaa waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub oo ay Jaamacadda Carabta usoo magacaabay dalka Soomaaliya Amb. Xaamuud Samaran Al Jowhary Al Xuweydi.
Danjire Xaamuud Samaran Al Jowhary Al Xuweydi oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Sucuudiga, wuxuuna badalay Amb. Maxamed C/dalla Idiris oo hore xillkaasi u haayay.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya C/qaadir Axmed-Kheyr Cabdi ayaa u rajeeyay danjiraha cusub ee Jaamacadda Carabta guul la taaban karo inuu ka gaaro howlaha loo igmaday, sidoo kalena horseed u noqdo in dhammaan dalalka carbeed ay magaalada Muqdisho dib uga furtaan safaaradahooda.
Si kastaba ha ahaatee, ururka Jaamacadda Carabta ayaa ah urur kulmiya dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta, wuxuuna muddooyinkii ugu dambeeyay noqday urur howlgab ah.